TOP NEWS: Dhageyso Xasan Shiikh oo Jawaab kulul siiyay Shiikh shariif Kadib Markii dhawaan uu…. – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 3rd January 2017 047
Madaxweyne Xasan Sheekh oo xalay taageere-yaashiisa kula hadlaayay Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arimo dhowr ah oo ay ugu weyntahay Musuq maasuqa dalka ka jira ee lagu eedeeyo dowladiisa.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa u muuqday mid ka jawaabaayay eedeymo kulul, oo Axadii kaga yimid Madaxweyneynihii hore ee Somaliya, Shariif Sheekh Axmed. Shariifka ayaa Dowladda Xasan Sheekh ku eedeeyay in ay lunsatay hantidii qaranka.
“Waxaa soo noq noqday eedaha sheegaya in dalka musuq maasuq baahay uu ka jiro. Musuq maasuqa waxaa lagula dagaalamaa hay’ado dhisan iyo sharciyad ay leeyihiin.”
“Waxaa meelo badan nooga dhiman weli oo aan dhameystirmin hay’adihii, inkastoo sharciyaddii hay’adahaasi in badanoo ka mida ay jiraan, laakiin jiritaankoodii iyo qaabayntoodii, ay wax ka dhiman yihiin.”
“Waxaan ballanqaadayaa in dagaal aan loo ganban oo laga cabsanin, oo aan leesu qaraabeysanin, leesu qolo qoleysanin, leesuna kooxo kooxeysanin ee dalka Somaliya loogala dagaalamayo musuq maasuqa iyo ku daneysiga ku takri falka awoodaha shacabka Somaliyeed, ay masuuliyiintoodu u dhiibteen, in dhaqan ku saleysan sharciyad la yaqaano oo qaanuun ah, in dalka laga dhaqangeliyo sida ugu dhakhsiyaha badan, haddii Alle yiraahdo.”
DEG DEG: Goalha Ammaanka oo si Cad u diiday Qorshe ay Dowlada kenya ka Damacsaneyd Howlgalka Amisom ee Soomaliya Kaasi oo ahaa In ….
Wasiirka Arimaha Gudaha oo baaq dheer u direy Xildhibaanadda Baarlamanka.
Daawo oo wax badan ka ogow qaska Kenya ka tagaan.